Liiska Dhaxalka Adduunka ee UNESCO wuxuu ku koray Kanada, Czechia, Jarmalka, Jamhuuriyadda Kuuriya, Myanmar iyo Poland
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Liiska Dhaxalka Adduunka ee UNESCO wuxuu ku koray Kanada, Czechia, Jarmalka, Jamhuuriyadda Kuuriya, Myanmar iyo Poland
Wararka Ururada • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Education • Wararka Dowladda • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka
Guddiga Dhaqanka Adduunka ayaa sabtidii ku qoro toddobada goobood ee dhaqanka UNESCO Liiska Dhaxalka Adduunka. Goobaha lagu daray oo ku yaal Kanada, Czechia, Jarmalka, Jamhuuriyadda Kuuriya, Myanmar iyo Poland. Qoraallada ayaa socon doona berri, 7 Luulyo.
Goobaha cusub, sida loogu dalbado qoraalka:
Bagan (Myanmar) - Bagan wuxuu jiifaa dhinaca wabiga Ayeyarwady ee ku yaal bartamaha Myanmar, Bagan waa dhul muqaddas ah, oo muujinaya farshaxan Buddhist iyo qaab dhismeed aad u kala duwan. Sideeda qaybood ee goobta waxaa ka mid ah macbadyo fara badan, stupas, monasteriyada iyo meelaha xajka, iyo sidoo kale haraaga qadiimiga ah, qurxinta iyo farshaxanada. Hantida ayaa leh markhaati cajiib ah heerka ugu sarreeya ee ilbaxnimada Bagan (11th-13th qarniyo CE), markii goobtu ahayd caasimad boqortooyo-goboleed. Isku soo wada duuboo qaab dhismeedka dhismaha ayaa ka tarjumaya xoogga cibaadada diinta ee boqortooyadii hore ee Buddhist.
Seowon, Korean Neo-Confucian Academies (Jamhuuriyadda Kuuriya) - Boggan, oo ku yaal bartamaha iyo koonfurta qaybaha Jamhuuriyadda Kuuriya, wuxuu ka kooban yahay sagaal badaha, oo matalaya nooc ka mid ah akadeemiyadda Neo-Confucian ee reer Joseon (15th-19thqarniyo CE). Barashada, xurmaynta aqoonyahanada iyo la dhaqanka deegaanka ayaa ahaa shaqooyinka muhiimka ah ee seowons, lagu muujiyey qaabkooda. Waxay ku yaalliin buuraha u dhow iyo ilaha biyaha, waxay doorbideen qaddarinta dabeecadda iyo beeritaanka maskaxda iyo jidhka. Dhismayaasha qaab-dhismeedka teendhada waxaa loogu talagalay in lagu fududeeyo isku xirnaanta muuqaalka. The seowons muujiyaan geeddi-socod taariikhi ah oo Neo-Confucianism oo ka yimid Shiinaha loola qabsaday xaaladaha Kuuriya.
Writing-on-Stone / Áísínai'pi (Kanada) - Goobtani waxay ku taal cidhifka woqooyi ee Bannaanka Wayn ee Woqooyiga Ameerika, oo ku yaal xadka u dhexeeya Kanada iyo Mareykanka. Dooxada Milk River waxay ku badan tahay muuqaalka guud ee muuqaal dhaqameedkan, kaas oo lagu gartaa uruurinta tiirarka ama hoodoos - tiirarka dhagaxa ah ee lagu nabaad guuriyay nabaad guurka ee qaababka cajiibka ah. Dadka Blackfoot (Siksikáíítsitapi) dadku waxay ku xardheen xardh iyo sawir gacmeedyo gidaarada sandstone ee Dooxada Milk, iyagoo markhaati ka ah farriimaha ka imanaya Noolaha Xurmada leh. Taariikhda qadiimiga ah waxay ku egtahay taariikhdu markay ahayd 1800 BCE ilaa bilowgii xilliga xiriirka kadib. Muuqaalkan waxaa loo arkaa mid muqaddas u ah dadka Blackfoot, dhaqankooda soo jireenka ah ee qarniyaal ahna waxaa lagu sii daayay xaflado iyo xushmad waarta meelaha.
Gobolka Macdanta Erzgebirge / Krušnohoří (Czechia / Jarmalka) - Erzgebirge / Krušnohoří (Buuraha Ore) waxay ku fidsan tahay gobol ku yaal koonfur-bari Jarmalka (Saxony) iyo woqooyi-galbeed Czechia, halkaas oo ay ku jiraan hanti badan oo biro ah oo looga faa'iideystay macdanta laga soo bilaabo qarniyadii dhexe. Gobolku wuxuu noqday isha ugu muhiimsan ee laga helo macdanta qalinka ee Yurub laga soo bilaabo 1460 - 1560 waxayna ahayd kicinta hal-abuurnimada farsamada. Tin wuxuu taariikh ahaan ahaa biraha labaad ee laga soo saaray laguna farsameeyay goobta. Dhamaadka 19th qarnigii, gobolku wuxuu noqday soo saare caalami ah oo uranium ah. Muuqaalka dhaqameed ee More More-ka waxaa si qoto dheer u qaabeeyay 800 oo sano oo macdan qodis joogto ah, laga bilaabo 12-kath 20th qarnigii, iyada oo la adeegsanayo macdanta, nidaamyada maaraynta biyaha ee hormarinta, soo saarista macdanta cusub iyo goobaha dhalaalida, iyo magaalooyinka macdanta.
Muuqaal muuqaal ah oo loogu talagalay Taranka iyo Tababbarka Farasyada Gawaarida ee Kladruby nad Labem (Czechia) - Waxay ku taalaa St areaední Polabí aagga Elbe, goobta waxay ka kooban tahay carro fidsan, bacaad leh waxaana ku jira beero, daaqyo ood leh, dhul howd ah iyo dhismayaal, oo dhammaantood loogu talagalay ujeeddada ugu weyn ee taranka iyo tababarka kladruber fardo, nooc faras qabyo ah oo loo isticmaalo xafladaha maxkamadda Habsburg. Beerta boqortooyada ee boqortooyada waxaa la aasaasay 1579 waxaana loo qoondeeyay hawshan tan iyo markaas. Waa mid ka mid ah hay'adaha yurub ee horseedka u ah faras-taranka, oo la sameeyay xilli fardo ay door muhiim ah ka ciyaareen gaadiidka, beeraha, taageerada milateriga iyo matalaadda aristocratic.
Nidaamka Maareynta Biyaha ee Augsburg (Jarmalka) - Nidaamka maaraynta biyaha ee magaalada Augsburg wuxuu u xuubsiibtay wejiyo isdaba jooga oo ka yimid 14-kath qarniga ilaa maanta. Waxay ka kooban tahay shabakad kanaallo, munaarado biyood ka bilaabanaya 15-kath si 17th qarniyo, oo ay ku yaalliin mashiinno bambooyin ah, hool kawaanleyda oo biyo qaboojiyey, nidaam ka kooban saddex ilo waaweyn iyo saldhigyo tamarta korontada laga dhaliyo, kuwaas oo sii wadaya inay bixiyaan tamar waarta maanta. Cusbooneysiinta tikniyoolajiyadeed ee uu soo saaray nidaamkan maareynta biyaha ayaa gacan ka geysatey aasaasida Augsburg oo hormuud u ah injineernimada hidda.
Gobolka Krzemionki Prehistoric ayaa lagu dhuftay Gobolka Macdanta Flint - (Poland) - Waxay ku taal gobolka buuraha ee Świętokrzyskie, Krzemionki waa isugeyn afar goobood oo macdanta laga qodo ah, laga soo bilaabo Neolithic ilaa Bronze Age (qiyaastii 3900 ilaa 1600 BCE), oo loogu talagalay soo saarista iyo soo saarista dhagax diillin la jeexjeexay, oo inta badan loo isticmaali jiray faaska samaynta. Iyada oo ay la socdaan qaab-dhismeedkeeda macdanta dhulka hoostiisa, aqoon-isweydaarsiyo dhagax ah iyo qaar ka mid ah 4,000 fallaadho iyo godad, goobta ayaa leh mid ka mid ah nidaamyada soo saarista iyo soo saarista dhuxusha ee dhulka hoostiisa ku jira oo dhammaystiran. Boggu wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan nolosha iyo shaqada degsiimooyinka taariikhda hore wuxuuna markhaati ka yahay dhaqan soo jireen ah oo dabar go'ay. Waa markhaati aan caadi ahayn oo ku saabsan muhiimadda xilligii taariikhda hore iyo macdan qodistii wax soo saarka aaladda ee taariikhda aadanaha.
The Kalfadhiga 43aad ee Guddiga Dhaqanka Adduunka ayaa sii soconaya illaa 10 July.